Valve inoenderera nekuvandudza Proton yeLinux yemitambo | Linux Vakapindwa muropa
Valve inoramba ichitsigira mutambo weLinux. Uchapupu hweizvi ndohwekuenderera mberi nekuvandudza uye nekuvandudza chirongwa chikuru ichi chine zita rekuti Proton Muchiitiko chekuti hausati waziva izvozvi, kumisikidza uku kunobva paWini kuunza yemuno Microsoft Windows mitambo kune iyo Stream Play mutengi yeLinux. Izvi zvinoreva kuti unogona kutamba zvirinyore Windows mazita nenzira yakapusa sezvingaitwe nemutengi weWindows. Uye zvakare, pane hombe runyorwa rwemitambo yevhidhiyo yakatsigirwa inoshanda 100%.
Vavle akazivisa kuburitswa kweProton 4.11 yeSteam Play. Kugadziridza kunonakidza pamwe neshanduko dzakakosha, pakati pavo zviuru zvekuvandudzwa senge zvimwe zvinokanganisa bugs mushanduro dzakapfuura, matambudziko kana uchitamba mimwe mitambo yemavhidhiyo, uye zvakare yeVulkan (D9VK). Semhedzisiro, pachavewo nemakumi mashanu nematanhatu ematanho kubva mukufambira mberi muProton kunoenda kunanga kuWine, inova inhau huru kumatunhu aya, anokurisana.
DXK yakagadziridzwa kuita vhezheni 1.3, uye vashandisi vanofarira chaicho chokwadi vari zvakare muhombe. Iyo yazvino vhezheni yeOpenVR SDK yave kutsigirwa. Kune rimwe divi, FAudio yakagadziridzwa kuita v19.07 uye GameMaker mazita akave nekugadziriswa. Kune zvakare kuvandudzwa maererano nekudyiwa kwemidziyo yehardware inoitwa ne software iyi, kuigadzirisa kuitira kuti idzikise mutoro.
Rumwe ruzivo nezve iyi yekuvandudza yeProton 4.11 inogona kuwanikwa mune yepamutemo peji reValve Steam
Kune rimwe divi, sezvatatotaura muLxA, Valve haina kugutsikana neizvozvo chete. Chokwadi unoziva imwe yeanovhura mapurojekiti akamuka, muchidimbu kuValve, senge wemusi. Iyo kambani irikusundidzira kwakawanda uye kwakawanda Linux rutsigiro, uye ikozvino echinyakare desktop enzvimbo senge KDE Plasma neGNOME inogona zvakare kubatanidzwa neiyo chaiyo chaiyo matekinoroji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Valve inoenderera nekuvandudza Proton yeLinux yemitambo
Linux Kernel 5.1 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo, gadziridza izvozvi